Paul's 1st Letter to Timothy – 2माछा
घर / बाइबल / Epistles / Paul's 1st Letter to Timothy
1 तिमोथी 1
1:1 पावलले, परमेश्वरको अख्तियार हाम्रो उद्धारकत्र्ताको र ख्रीष्ट येशूको हाम्रो आशा द्वारा येशू ख्रीष्टको एक प्रेरित,
1:2 तिमोथीलाई, विश्वासमा प्रिय छोरा. ग्रेस, कृपा, र शान्ति, परमेश्वर पिताको देखि र ख्रीष्ट येशूको हाम्रा प्रभु देखि.
1:3 अब म एफिससमा मा रहन तपाईं सोधे, म म्यासिडोनिया गए जबकि, तपाईं कडा फरक बाटो सिकाउन छन् जो निश्चित व्यक्तिहरूलाई विरुद्ध बोल्न भनेर त,
1:4 Fables र अनन्त genealogies ध्यान छन् गर्नेहरू विरुद्ध. यी कुराहरू वर्तमान प्रश्नहरू तिनीहरूले परमेश्वरको छ कि नसीहत भन्दा ठूलो थिए भने, जो विश्वास छ.
1:5 अब निर्देशन को लक्ष्य शुद्ध हृदय देखि दान छ, र एक असल अन्तस्करण, र एक unfeigned विश्वास.
1:6 केही व्यक्ति, यी कुराहरू दूर भटक, खाली babbling गर्न ठेस लागेका छन्,
1:7 व्यवस्था को शिक्षकहरू हुन चाहने, तर तिनीहरूले आफूलाई भनिरहेका छन् कि न कुराहरू बुझ्न, न त तिनीहरूले यी कुराहरू बारे के affirming छन्.
1:8 तर हामी व्यवस्था राम्रो छ भनेर थाहा, एक ठीक यो प्रयोग बनाउँछ भने.
1:9 बुझेर यस, व्यवस्था र बस लागि ठाँउ मा सेट थियो, तर अन्यय र insubordinate लागि, यो impious र पापी लागि, लागि दुष्ट र defiled, patricide प्रतिबद्ध गर्नेहरूका लागि, matricide, वा हत्यारो,
1:10 fornicators लागि, पुरुषहरु संग सुत्न गर्ने पुरुषहरु लागि, अपहर्ताओं लागि, फटाहा लागि, perjurers लागि, र सिद्धान्त लाग्न विपरीत अरू जे छ,
1:11 जो अनमोल परमेश्वरको महिमा सुसमाचारमा संग अनुसार छ, मलाई सुम्पे गरिएको छ जो सुसमाचार.
1:12 मलाई बलियो छ जसले म उहाँलाई धन्यवाद दिन, ख्रीष्ट येशूको हाम्रा प्रभु, उहाँले मलाई विश्वासयोग्य छलफल गरेको छ किनभने, सेवकाईमा मलाई प्लेस,
1:13 पहिले हुनत म एक blasphemer थियो, र सताएर,, र contemptuous. तर त्यसपछि म परमेश्वरको कृपा प्राप्त. म ignorantly अभिनय गरिएको थियो लागि, unbelief मा.
1:14 अनि त हाम्रो प्रभुको अनुग्रह निकै abounded छ, ख्रीष्ट येशूको मा छ कि विश्वास र प्रेम संग.
1:15 यो एक विश्वासी भन्दै छ, र सबैलाई द्वारा स्वीकृति लायकको, ख्रीष्ट येशूको पापी गर्न मुक्तिको ल्याउन यस संसारमा आएको, जसलाई बीचमा म पहिलो हुँ.
1:16 तर यो म कृपा प्राप्त भनेर यस कारण थियो, यति भनेर मलाई रूपमा पहिलो, ख्रीष्ट येशूको सबै धैर्य प्रदर्शन हुनेछ, अनन्त जीवन निम्ति उहाँलाई विश्वास गर्ने गर्नेहरू निर्देशन लागि.
1:17 त्यसैले त, उमेर राजा गर्न, अमर गर्न, अदृश्य, एकान्त परमेश्वरको, सदासर्वदा आदर र महिमा हुन. Amen.
1:18 म तपाईंलाई प्रशंसा यस precept, मेरो छोरा तिमोथी, तपाईं preceded गर्ने अगमवक्ताहरूलाई संग अनुसार मा: तपाईं एउटा राम्रो युद्ध मा एक सिपाहीले जस्तै तिनीहरूलाई बीचमा सेवा भनेर,
1:19 विश्वास र असल विवेक गर्न रोकिराखेको, ती विरुद्ध गर्ने, यी कुराहरू तिरस्कार गरेर, विश्वास को एक जहाज नष्ट गरेका छन्.
1:20 यी बीचमा Hymenaeus र अलेक्जेन्डर हुन्, म शैतानले गर्न हस्तान्तरण गरेका छन् जसलाई, तिनीहरूले blaspheme छैन सिक्न सक्छ भनेर.
1 तिमोथी 2
2:1 अनि त म तपाईं माग्छु, सबै को पहिलो, अन्तरबिन्तीले बनाउन, प्रार्थना, निवेदन, सबै मानिसहरू र thanksgivings,
2:2 राजाहरूले लागि, र सबै उच्च स्थानमा छन् जो, हामी सबै piety र नैतिक शुद्धता मा एक शान्त र tranquil जीवन जिउन सक्छ भनेर.
2:3 यो परमेश्वरले हाम्रो उद्धारकत्र्ताको को दृष्टि मा राम्रो र स्वीकार्य छ लागि,
2:4 जो सबै मानिसहरू मुक्ति गर्न र सत्यको एक स्वीकृति पुगे चाहनुहुन्छ.
2:5 लागि एक परमेश्वरले त्यहाँ छ, परमेश्वर र मानिसहरूको एक मध्यस्थकर्ताको र, मानिस ख्रीष्ट येशूको,
2:6 सबै लागि छुटकारा रूपमा आफूलाई दिनुभयो गर्ने, यसको उचित समय मा एक गवाही रूपमा.
2:7 यो गवाही को, म एक प्रचारक र एक प्रेरित नियुक्त गरिएको छ, (म सत्य बोल्न, म झूठ छैन) अन्यजातिहरूको शिक्षकको रूपमा, विश्वास र सत्य मा.
2:8 त्यसैले, मैले मानिसहरूलाई हरेक ठाउँमा प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ, शुद्ध हात माथि उठाने, रिस वा dissension बिना.
2:9 त्यसैगरि पनि, महिला fittingly लुगा गर्नुपर्छ, compunction र रोक्ने काम आफैलाई adorning, र छैन plaited बाल संग, न त सुन, न त मोती, न त महंगा पोशाक,
2:10 तर राम्रो काम को माध्यमबाट piety professing छन् जो महिलाहरु को लागि उचित एक प्रकारले.
2:11 एक महिला सबै अधीनमा संग मौन मा सिक्न गरौं.
2:12 म सिकाउन एक महिला अनुमति छैन लागि, न त मानिसको अधिकार मा हुन, तर मौन मा हुन.
2:13 आदम लागि पहिलो गठन भएको थियो, त्यसपछि हव्वा.
2:14 अनि आदम seduced थिएन, तर महिला, seduced गरिएको भएको, अपराधको थियो.
2:15 यद्यपि त्यो असर छोराछोरीलाई द्वारा बचत हुनेछ, त्यो विश्वास र प्रेम मा जारी छ भने, र पवित्रीकरण मा आत्म-रोक्ने काम गरेर accompanied.
1 तिमोथी 3
3:1 यो एक विश्वासी भन्दै छ: एक मानिस episcopate चाहनुहुन्छ भने, उहाँले राम्रो काम चाहनुहुन्छ.
3:2 त्यसैले, एक बिशप निन्दा परे हुन लागि यो आवश्यक छ, एक पत्नी को पति, सचेत, बुद्धिमानी, दयालु, स्वच्छ, सत्कार, एक शिक्षक,
3:3 एक drunkard, combative तर रोकी छैन, भ्कगडालु छैन, लालची छैन;
3:4 तर राम्रो आफ्नै घर जान्छ मानिसलाई, सबै नैतिक शुद्धता संग अधीनस्थ छन् जो भएको छोराछोरीलाई.
3:5 एक मानिस आफ्नै घर नेतृत्व कसरी थाहा छैन भने लागि, उहाँले परमेश्वरको चर्च हेरविचार कसरी?
3:6 उहाँले नयाँ रूपान्तरण हुन हुँदैन, lest, घमण्डले elated भइरहेको, उहाँले शैतानको वाक्य अन्तर्गत गिर सक्छ.
3:7 उहाँलाई पनि बाहिर भएकाहरूलाई असल गवाही छ लागि र यो आवश्यक छ, उहाँले disrepute फस्न र शैतानको पासो हुन सक्छ भनेर.
3:8 त्यसैगरि, deacons स्वच्छ हुनुपर्छ, डबल-tongued छैन, धेरै रक्सी गर्न दिइएको छैन, दूषित मुनाफा पछि लाग्दा छैन,
3:9 शुद्ध विवेक संग विश्वासको रहस्य गर्न रोकिराखेको.
3:10 अनि यी कुराहरू पहिलो सिद्ध हुनुपर्छ, र त्यसपछि तिनीहरूले प्रधानमन्त्री मई, अपमान बिना हुनुको.
3:11 त्यसैगरि, महिला स्वच्छ हुनुपर्छ, छैन slanderers, सचेत, सबै कुरामा विश्वासी.
3:12 Deacons एक पत्नी को पति हुनुपर्छ, राम्रो आफ्नै छोराछोरी र आफ्नै घर नेतृत्व गर्ने मानिसहरू.
3:13 आफूलाई लागि राम्रो स्थिति प्राप्त हुनेछ राम्रो ministered भएकाहरूलाई लागि, र ख्रीष्ट येशूको मा छ जो विश्वासमा धेरै भरोसा.
3:14 म तिमीहरूलाई यी कुराहरू लेखन छु, म चाँडै नै हुनेछ भन्ने आशा.
3:15 तर, म ढिला छु भने, यो परमेश्वरको घरमा आफैलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक छ जसमा तपाईं तरिका थाह हुनुपर्छ, जीवित परमेश्वरको चर्च जो छ, यो स्तम्भ र सत्यको जग.
3:16 र यो स्पष्ट ठूलो छ, piety यस रहस्य, शरीरका मा प्रकट भएको थियो, जो, आत्मा जायज थियो, जो स्वर्गदूतहरूलाई देखा पर्नुभयो छ, अन्यजातिहरूको प्रचार गरिएको छ, जो, संसारमा विश्वास छ, जो, महिमा मा माथि लिएका गरिएको छ जो.
1 तिमोथी 4
4:1 अब आत्मा स्पष्ट भने, अन्त समयमा, केही व्यक्ति विश्वास देखि प्रस्थान गर्नेछ, त्रुटि को आत्मा र डेविल्स को doctrines ध्यान,
4:2 कपट बोल्न झूट, र आफ्नो consciences seared भएको,
4:3 prohibiting विवाह, खाद्य पदार्थ देखि abstaining, परमेश्वरले विश्वासी द्वारा र सत्य बुझेका छन् गर्नेहरूलाई द्वारा धन्यवाद स्वीकार गर्न सृष्टि छ जो.
4:4 परमेश्वरको हरेक सृष्टि असल छ लागि, र केही धन्यवाद प्राप्त छ जो अस्वीकार गर्न छ;
4:5 यो परमेश्वरको वचन द्वारा र प्रार्थना गरेर पवित्र छ लागि.
4:6 भाइहरूलाई यी कुराहरू proposing द्वारा, तपाईं ख्रीष्ट येशूको एक असल सेवक हुनेछ, विश्वासको शब्दहरू द्वारा nourished, र असल सिद्धान्त द्वारा तपाईं सुरक्षित छन् कि.
4:7 तर पुरानो महिलाहरु को बेवकूफ Fables जोगिन. Piety मा अघि बढाउन रूपमा यति र आफैलाई व्यायाम.
4:8 शरीर को व्यायाम लागि केहि उपयोगी छ. तर piety सबै कुराहरू उपयोगी छ, जीवनको प्रतिज्ञा रोकिराखेको, वर्तमान र भविष्यमा.
4:9 यो एक विश्वासी भन्दै र पूर्ण स्वीकृति लायकको छ.
4:10 यस कारण हामी श्रम र लागि maligned छन्: हामी जीवित परमेश्वरको आशा किनभने, सबै मानिसहरूको उद्धारकत्र्ताको गर्ने छ, सबैभन्दा विशेष गरी विश्वासी को.
4:11 निर्देशन र यी कुराहरू सिकाउन.
4:12 कुनै एक आफ्नो युवा बेकारको भनेर नठान गरौं, तर शब्द मा विश्वासी बीचमा एउटा उदाहरण हुन, व्यवहार मा, दान मा, विश्वास, नैतिक शुद्धता मा.
4:13 म आने सम्म, पढेको धाउन, सल्लाह गर्न, र सिद्धान्त गर्न.
4:14 तपाईं भित्र छ कि अनुग्रहको बेवास्ता गर्न इच्छुक छैन, भविष्यवाणी तपाईंलाई दिइएको थियो जो, यो पुजारीको हातमा को कर संग.
4:15 यी कुराहरू मनन, आफ्नो प्रगति सबै प्रकट हुन सक्छ भनेर.
4:16 आफैलाई गर्न र सिद्धान्त ध्यान. यी कुराहरू पछि लाग्न. मा यसो लागि, तपाईं आफैलाई र तपाईं सुन्न गर्नेहरूलाई दुवै बचत हुनेछ.
5:1 तपाईं एउटा पुरानो मानिसलाई सुधार् हुँदैन, बरु उसले निवेदन, उहाँले आफ्नो बुबा थिए भने; जवान मानिसहरू संग, भाइहरूले जस्तै;
5:2 पुराना महिलाहरु संग, आमा जस्तै; जवान महिलाहरु संग, सबै नैतिक शुद्धता मा, बहिनीहरूले जस्तै.
5:3 साँचो विधवाहरूलाई भएकाहरूलाई विधवाहरूलाई आदर.
5:4 तर कुनै पनि विधवाको छोराछोरी वा नातिनातिनी छ भने, उनको पहिलो उनको आफ्नै घरभित्रका व्यवस्थापन गर्न सिक्न गरौं, र पूरा गर्न, बारी मा, उनको आमाबाबुले उनको आफ्नै दायित्व; यस लागि परमेश्वरको सामु स्वीकार्य छ.
5:5 तर त्यो साँच्चै विधवा छ र गरिब छ, जसले, परमेश्वरले उनको आशा गरौं, र उनको अन्तरबिन्तीले र प्रार्थनामा जरुरी होस्, रात र दिन.
5:6 त्यो लागि जो सुख बाँचिरहेका मरेको छ, बाँचुन्जेल.
5:7 र यो मा निर्देशन दिन, तिनीहरूले निन्दा परे हुन सक्छ भनेर.
5:8 तर कसैले आफ्नै लागि कुनै चासो छ भने, र विशेष गरी उसको आफ्नै घरभित्रका ती लागि, उहाँले विश्वास अस्वीकार गरेको छ, र उहाँले एक unbeliever भन्दा बुरा छ.
5:9 विधवा उमेर कुनै कम साठी भन्दा वर्ष छ जो छान्नुभएको गरौं, एक पति को पत्नी जो थियो,
5:10 जो उनको राम्रो काम को गवाही छ: त्यो छोराछोरीलाई शिक्षित छ कि छैन, वा अतिथि सत्कार प्रदान गरेको छ, वा सन्तहरूलाई खुट्टा धोए छ, वा ती पीडित कष्ट गर्न ministered छ, वा राम्रो काम को कुनै पनि प्रकारको पछि लाग्ने छ.
5:11 तर कान्छो विधवाहरूलाई जोगिन. तिनीहरूले ख्रीष्टमा फस्टाए छन् एकचोटि लागि, तिनीहरूले विवाह गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ,
5:12 Damnation परिणामस्वरूप, तिनीहरूले विश्वासका primacy disregarded छन् किनभने.
5:13 र एउटै समयमा हुनुको पनि निष्क्रिय, तिनीहरूले घरघरमा जान सिक्न, केवल निष्क्रिय छैन हुनुको, तर पनि talkative र उत्सुक, तिनीहरूलाई चासो छैन जो कुराहरू बताइरहेका.
5:14 त्यसैले, म कान्छो महिला विवाह गर्न चाहनुहुन्छ, छोराछोरीलाई procreate गर्न, परिवारका आमा हुन, यो शत्रु दुष्ट बोल्न लागि कुनै तयार मौका प्रदान गर्न.
5:15 केही व्यक्तिहरूलाई पहिले नै शैतानले फिर्ता भयो छन्.
5:16 विश्वासी बीचमा कुनै पनि विधवाहरूलाई छ भने, तिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री र छैन बोझ चर्च उसलाई, भनेर साँचो विधवाहरूलाई भएकाहरूलाई लागि पर्याप्त हुन सक्छ.
5:17 गरौं राम्रो दोब्बर आदर योग्य आयोजित सकिन्छ नेतृत्व गर्ने पुजारीहरू, वचन र सिद्धान्त विशेष गरी ती जो श्रम.
5:18 धर्मशास्त्र यसो भन्छ लागि: यो अन्न बाहिर treading छ रूपमा "तपाईं एउटा गोरु थूथन हुनेछैन,"र, "यो कामदार आफ्नो पे लायकको छ।"
5:19 एक पुजारी विरुद्ध एक अभियोग स्वीकार गर्न इच्छुक छैन, दुई वा तीन साक्षी अन्तर्गत बाहेक.
5:20 सबैलाई को दृष्टि मा पापी सच्याउनुभयो, त्यसैले अरूलाई डर हुन सक्छ कि.
5:21 म परमेश्वर र ख्रीष्ट येशूको र चुन्नु स्वर्गदूतहरूलाई पहिले पुष्टि, तपाईं prejudgment बिना यी कुराहरू पालन गर्नुपर्छ भनेर, या त पक्ष गर्न favoritism देखाउँछ जो केही गरिरहेको.
5:22 तपाईं कुनै मा हात आयातित छिटो हुनु हुँदैन, न त तपाईं outsiders पापको मा भाग लिन गर्नुपर्छ. स्वच्छ आफैलाई राख्न.
5:23 मात्र पानी पिउन जारी नगर्नुहोस्, तर एक सानो रक्सी को प्रयोग, आफ्नो पेट को खातिर र आफ्नो बारम्बार infirmities लागि.
5:24 केही मानिसहरूको पाप प्रकट गरिएको छ, न्याय गर्न तिनीहरूलाई अघिल्लो, तर अरूको ती पछि प्रकट गर्दै.
5:25 त्यसैगरि, पनि, राम्रो कामहरू प्रकट गरिएको छ, तर तिनीहरूले पनि जब, तिनीहरूले लुकेको भइरहन सक्दैन.
6:1 यो जुवा बोक्न सेवकहरू जसले छन्, तिनीहरूलाई हरेक आदर योग्य हुन आफ्नो मालिकको विचार गरौं, नाम र प्रभु को सिद्धान्त lest blasphemed हुन.
6:2 तर ती विश्वास मालिकको छ जो, तिनीहरूले भाइहरूलाई छन् किनभने तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई बेकारको भनेर नठान गरौं, तिनीहरूले विश्वास र प्रिय छन् किनभने बरु सबै अधिक तिनीहरूलाई सेवा, एउटै को सहभागीहरू
सेवा. सिकाउनुहोस् र यी कुराहरू exhort.
6:3 कसैले अन्यथा सिकाउँछ भने, र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको ध्वनि शब्दहरू गर्न सहमति छैन, र सिद्धान्त गर्न piety संग अनुसार छ जो,
6:4 त्यसपछि उहाँले घमण्डी छ, केही थाह, अझै शब्दहरू प्रश्नहरू र quarrels बीच languishing. यी देखि डाह खडा, contention, निन्दा, दुष्ट शक:
6:5 मनमा भ्रष्ट र सत्यको deprived छन् जो मानिसहरूको द्वन्द्व, मुनाफा piety हुन जो विचार.
6:6 तर sufficiency संग piety ठूलो लाभ छ.
6:7 हामी यो संसारमा केही ल्याए लागि, र हामी केही दूर गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छ.
6:8 तर, भएको पोषण र कवर केही प्रकारको, हामी यी संग सामाग्री हुनुपर्छ.
6:9 प्रलोभनको मा र शैतानको पासो मा र धेरै बेकारी र हानिकारक इच्छा मा धनी गिरावट बन्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूका लागि, विनाश र perdition मा मानिसहरू पानीमुनि जानु जो.
6:10 इच्छा लागि सबै दुष्टताहरूलाई मूल छ. केही व्यक्ति, यसरी hungering, विश्वास देखि बरालिएकाहरूप्रति र धेरै Sorrows मा आफूलाई फसाइएको छ.
6:11 तर तिमी, परमेश्वरको हे मानिस, यी कुराहरू भाग्ने, र साँच्चै न्याय पछि लाग्न, piety, विश्वास, दान, धैर्य, नम्रता.
6:12 विश्वासको असल लडाइँ लड्न. तपाईं भनिन्छ छन् जो गर्न अनन्त जीवनको पकड लिनुहोस्, र धेरै साक्षी को दृष्टि विश्वास को एक राम्रो पेशा बनाउन.
6:13 म तपाईं चार्ज, परमेश्वरको नजरमा, जो सबै कुराहरू enlivens, र ख्रीष्ट येशूको को दृष्टि मा, जो पिलातसलाई अन्तर्गत राम्रो पेशा गवाही दिनुभयो,
6:14 यो आज्ञा पालन गर्न, immaculately, irreproachably, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती निम्ति.
6:15 लागि उचित समय मा, उहाँले अनमोल र मात्र पावर प्रकट हुनेछ, राजाहरूले राजा र lords को प्रभु,
6:16 जो एक्लै अमरता धारण, र जो दुर्गम प्रकाश inhabits, जसलाई कुनै मानिसले देखेको छ, न त पनि हेर्न सक्षम छ, जसलाई आदर र अनन्त डोमिनियन छ. Amen.
6:17 यस उमेर को धनी एक उच्च मनोवृत्ति छ छैन निर्देशन, न त धन को अनिश्चितता आशा गर्न, तर जीवित परमेश्वर, जो रमाइलो गर्न हामीलाई प्रशस्त मात्रामा मा सबै प्रदान,
6:18 र राम्रो गर्न, राम्रो काम मा धनी बन्न, सजिलै दान गर्न, साझेदारी गर्न,
6:19 भविष्यको लागि आफूलाई लागि राम्रो जग ढुकुटीमा जम्मा गर्न, तिनीहरूले साँचो जीवन प्राप्त गर्न सक्छ भनेर.
6:20 हे तिमोथी, तपाईं संग जम्मा गरिएको छ के गार्ड, अपवित्र सस्ता माल को र विरोध विचारहरू को आवाज अलग्गै, जो falsely ज्ञान भनिन्छ.
6:21 केही व्यक्ति, यी कुराहरू प्रतिज्ञा, विश्वास देखि perished छन्. तपाईं संग ग्रेस सक्छ हुन. Amen.